Guriga New Hampshire wuxuu ansixiyay sharciga marijuana sharciyeynta • Daawooyinka Inc.eu
Bogga ugu weyn cannabis Guriga New Hampshire wuxuu ansixiyay sharciga sharciyeynta marijuana
Guriga New Hampshire wuxuu ansixiyay sharciga sharciyeynta marijuana
albaabka Ties Inc. April 3 2022
maqaal by Ties Inc. April 3 2022
Aqalka New Hampshire ayaa khamiistii meel mariyay sharci lagu sharciyaynayo marijuana iyadoo loo marayo qaab ay dawladu maamusho.
"Ujeedada koowaad ee arrintan biilka waa siyaasadda sharciyeynta marijuana ee lahaanshaha iyo isticmaalka shakhsi ahaaneed labadaba waxaana ansixiyay Golaha horaantii kalfadhigan, "ayuu yiri Rep. Timothy Lang (R) bayaan uu soo saaray. "Sharcigani waxa uu fuliyaa yoolkaas aasaasiga ah, sidaa darteed New Hampshire mar dambe ma xiri doonto oo ma dacweyn doonto muwaadiniinta New Hampshire hantidooda xashiishadda shakhsi ahaaneed."
Isagoo ku hadlaya magaca dadka laga tirada badan yahay ee guddiga, Rep. Richard Ames (D) in xubnuhu ay isku raaceen in mamnuucida joogtada ah ee nidaamka xashiishadda madadaalada ee New Hampshire aysan shaqaynayn iyo in mamnuucidani ay abuurto suuq madow oo sharci darro ah oo waxyeelo leh.
Si kastaba ha ahaatee, dadka tirada yar ayaa aaminsan inay jiraan su'aalo badan oo aan laga jawaabin iyo hubanti la'aan ku saabsan dakhliga iyo kharashyada ku jira sharcigan si loo dammaanad qaado oggolaanshaha wakhtigan."
1 caws dawladeed
2 Soo jeedinta sharci ee sharciyeynta
Muddo sanado ah, taageerayaashu waxay u riixayeen xad-gudubka xashiishadda iyo suuq nidaamsan oo loogu talagalay macaamiisha qaangaarka ah. Si kastaba ha noqotee, fikradda suuqa xashiishadda ee ay dowladdu maamusho ayaa dad badan oo daneeyayaal ah uga tagay boos celin.
Guddiga, xubnuhu waxay ansixiyeen wax ka bedel lagu burinayo soo jeedinta ugu badnaan 15 shati ee beero gaar loo leeyahay oo siin doona bakhaarka gobolka wax soo saarka. Qaar ka mid ah u doodayaasha iyo daneeyayaasha ayaa ka mahad celiyay dib u eegistaas, laakiin wakiilada warshadaha cannabis ee hadda jira ee New Hampshire ayaa wali aaminsan in sharcigani uu si weyn u saameyn doono ku sii jiritaankooda suuqa.
Soo jeedinta sharci ee sharciyeynta
Sharcigu sida la ansixiyay wuxuu ka hor istaagayaa macaamiisha meel kasta oo ay joogaan inay iibsadaan alaabada xashiishadda sida kuwa la cuni karo. Tani waxay taageerayaashu u arkaan inay tahay mid xaddidan oo aan loo baahnayn. Maaddaama sharcigu sidoo kale meesha ka saarayo qaanuun dawladeed oo hadda jira oo xakameysa xashiishadda, kuwa haysta alaabadaas waxay wajihi karaan ciqaab. Taasi waa sababta wax-ka-beddel loogu sameeyay in laga takhaluso haysashada cuntooyinka la cuno.
Sharciga ayaa xoogaa ammaan ah ka helay guddoomiyaha gobolka Chris Sununu (R), kaas oo sheegay in dib u habeyntu "ay noqon karto lama huraan" gobolka. Inkasta oo uu taariikh ahaan si cad uga soo horjeeday sharciyaynta. Gudoomiyuhu waxa uu intaa ku daray waraysi gaar ah oo uu dhawaan bixiyay in aanu “si buuxda uga go’nayn” mucaaradnimadiisa dheer ee sharciyaynta.
Si kastaba ha ahaatee, in kasta oo guddoomiyaha aqlabiyadda oggolaanshaha lama filaanka ah, labadaba hoggaamiyaha aqlabiyadda Senate-ka iyo hoggaamiyaha laga tirada badan yahay ayaa dhawaan sheegay in aanay u malaynayn in hadda la joogo waqtigii la sharciyeyn lahaa - taasoo keentay su'aalo dhab ah oo ku saabsan waddada sharciga ee xafiiska Sununu inkasta oo Khamiista tallaabo Golaha.
Sharcigu wuxuu qeexayaa qaab ay dhammaan xarumaha xashiishadda ee New Hampshire ay noqon doonaan kuwo ay dawlad-goboleed ka hoos shaqeyn doonto Guddiga Khamriga ee Gobolka. Waxa ay hadda soo jeedinaysaa xaddid ku saabsan tirada shatiga koritaanka oo kuma jiraan wax qodobbo ah oo ku saabsan koritaanka guriga. Sharci ahaan, dadka waaweyn ayaa loo oggolaaday inay haystaan ​​ilaa afar wiqiyadood oo xashiishad ah.
Xeer-ilaaliyeyaasha gobolku waxay haysan doonaan ilaa Oktoobar 1 si ay u dejiyaan xeerar xukuma diiwaangelinta iyo nidaaminta xarumaha xashiishadda iyo tas-hiilaadka xashiishadda. Intaa ka dib, waxay haystaan ​​laba bilood si ay u dejiyaan xeerar ku saabsan waxyaabaha ay ka midka yihiin xayaysiinta, calaamadaynta, ganaaxyada madaniga ah, amniga iyo xadka THC.
Wax-ka-beddelka dhigaya dakhliga cashuuraha qaarkood ee ka soo baxa iibinta marijuanaada ee sanduuqa waxbarashada ee gobolka ayaa cod ku meel mariyey dabaqa. Taageerayaasha sharciyeynta xashiishadda ee gobolka ayaa walaac ka muujiyay sharciga, iyaga oo sheegay in labada nooc ee ay dawladu maamusho iyo xaddididda shatiga beeralayda ee lagu soo jeediyay sharciga ay ka joojinayso New Hampshire inay sidaas samayso si ay u hesho faa'iidooyinka buuxa ee sharciyeynta gobolkooda.
Dadku waxay sidoo kale ka baqayaan in soo jeedintu ay ku timaado kharashka suuqa hore ee daawada xashiishadda. Xildhibaan ayaa isku dayay inuu si weyn u bedelo sharciga isagoo u oggolaanaya shirkadaha gaarka loo leeyahay inay iibiyaan marijuana halkii ay ka iibin lahaayeen hawlwadeennada ay dawladdu maamusho. Mooshin lagu soo gudbiyay wax ka bedelka ayaa la diiday.
Akhri wax dheeraad ah marijuanamoment.net (Source, EN)
Xashiishad laga helay beerta baarlamaanka New Zealand
Faa'iidooyinka iyo khasaaraha cabitaannada CBD
Caymisyada xashiishadda Mareykanka ayaa u diyaar garoobaya federaalka ...
Shan tilmaamood oo ku saabsan sigaar cabista marijuana…